Ajouter un commentaire - Ny tanananay. - Ambohibary, vohitra soa !
Kaominina ambanivohitra i Ambohibary. Tsy mena mitaha amin'ireo kaominina hafa manodidina anefa izy. Tsy mitokamonina izy fa lalovan'ny lalan-tany azo aleha mandavan-taona. Ahitana ireo foto-drafitra ilain'ny fivelarana sy ny fandrosoana rehetra izy : ao ny hopitaly CSBII, izay manana ny toerany tokoa satria dia manampy betsaka ny mponina amin'ny fitandroana ny fahasalam-bahoaka, ary indrindra koa ny fiterahana. Manampy azy ao koa ny tobim-panafody, izay ahitana ireo izay ilaina...